४ अङ्कले घटेको बजारमा ३३ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी ४ अङ्कले घटेको बजारमा ३३ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि
४ अङ्कले घटेको बजारमा ३३ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि
भदौ १३, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको १५ मिनेटसम्म सामान्य उकालो लागेको बजार सो पछि दिनभरिमा ४ दशमलव ७९ अङ्कले घटेर १ हजार १ सय ७२ दशमलव ३० विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार १ सय ७७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक घटेर १ हजार १ सय ७१ विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ भने जीवन बीमाको शून्य दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको छ । यस दिन कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीको ३ हजार २ सय ७४ पटकको व्यापारमा ६ लाख ४ हजार ४ सय ३८ कित्ता शेयरको रू. १९ करोड २१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन म्यानुअल कारोबार रू. ४ लाख १२ हजार बराबरको भएको छ ।
नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने १० कम्पनीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्टको प्रतिकित्ता रू. ६ सय २८ मा रू. १ करोड ३२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, एनएमबि बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. ३ सय ११ मा रू. ८७ लाख २८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । ङादी गु्रप पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य ४ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ७६ मा कारोबार भएको छ भने एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको ४ प्रतिशतले शेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४ सय ८२ मा कारोबार भएको छ ।
साथै, कालिका माइक्रोक्रेडिटको शेयर मूल्य ५ दशमलव १६ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार १ सय ९४ मा कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीमा ३३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय ३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २८ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
कारोबार भएको २ घण्टामा ८.६८ अंकको वृद्धि (१ बजेको अपडेट)
बिहीवार पहिलो घण्टामा ३.५५ अंकले बढ्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)